बिहानै थपिए ४४ संक्रमित, कहाँ कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
बिहानै थपिए ४४ संक्रमित, कहाँ कति ?
चितवनः थप ४४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
भरतपुर अस्पताल कोभिड ल्याबमा गएराति गरिएको परीक्षणमा ४४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । नयाँ संक्रमित चितवनका ४० जना छन् भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मात्रै ३६ जना छन् ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा कोरोनाः १४ दिनमा १० को मृत्यु, ५ सय बढी संक्रमित
नवलपुर, रुपन्देही, तनहुँ र धनुषाका १–१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
ट्याग्स: कोरोना भाइरस, भरतपुर अस्पताल